Ndị nrụnye maka OS X tupu February 2016 akwụsịla ịrụ ọrụ | Esi m mac
Ndị nrụnye OS X tupu February 2016 akwụsịla ịrụ ọrụ
Taa ma ọ bụrụ na ahịrịokwu ahụ nwere ike ịgbabata m n'uche ... »Nke a na Steve Jobs emeghị» o yikwara ka ọ na-aga afọ ole na ole na-enweghị akụkụ mbụ nke OS X na ọ bụrụ na e nyere nke ahụ ugbu a. Anyị na-ekwu maka asambodo nke ndị nrụnye OS X. Mgbe onye ọrụ na-esi na Mac App Store budata ụfọdụ ngwa gụnyere OS X n'onwe ya n'ụdị ya dị iche iche, onye nrụnye ahụ na-edobe nkwenye na sava Apple.
Nke ahụ bụ kpọmkwem nsogbu ndị ọrụ nwere OS X installers tupu February 2016. Ha na-ezute.Ha na-achọpụta na ha enweghị ike ịwụnye usoro ahụ. n'ihi na otu onye nhazi ahụ na-enye njehie metụtara njedebe nke asambodo na sava nke Apple.
Ndị nke apụl bitụ emeela ka asambodo nke ngwa ndị dị na Mac App Store gwụ ma n'ụzọ dị otu a, ọ bụrụ na ibudatara onye nrụnye nke oS X - na diski ike gị iji jiri ya mee ihe mgbe ị chere na ọ dị mma ma ọ bụ na ị mepụtala USB echichi, ị na-aga na-eme na-enweghị ha na ibudata ọhụrụ version nke installer gị mkpa ọzọ.
N'oge na-adịbeghị anya ọ maara na ndị nrụnye ngwa ngwa nke ndị ọzọ na-ada ada n'ihi njedebe nke asambodo ha na nke a Apple aghaghị ịnagide ịmepụta asambodo ọhụrụ nke ga-ekwe ka ntinye nke ngwa ndị a n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Nsogbu asambodo ahụ ruru nke a nke na enweghị ike ibudata ụdị OS X Lion system na akụrụngwa ọgbara ọhụrụ nke Apple tinyere n'ahịa, jiri naanị sistemụ dị ugbu a, OS X El Capitan Dị ka anyị si mara, nke a emebeghị ma ọ bụ na Mac nsụgharị ka arụnyerela tupu nke ugbu a nke OS X.
Apple amaliteworị ịrụ ọrụ iji dozie njehie ndị a site na ịmepụta asambodo ọhụrụ dị irè. Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọghị ichere ka azịza pụta, ị nwere ike ịghọgbu onye nrụnye site na ịgbanwee ụbọchị na kọmputa site na Terminal site na ịpị:
Ya mere ọ bụrụ na ị na-agbalị iji ihe installer na ọ nọgidere na-enye gị njehie, ị maara ihe kwere omume ngwọta bụ ruo mgbe Apple na-eme ihe na okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » Ndị nrụnye OS X tupu February 2016 akwụsịla ịrụ ọrụ
N'okwu ole na ole, enweghị m ike ịgbanwe diski nke mac m ka ọ bụrụ sed, n'ihi na pendray nke ọ na-ewe anaghị arụ ọrụ m
Apple enweghịzi mmasị na ikike mgbasa ozi NFL
Wifi Mouse Pro n'efu na Storelọ Ahịa App maka ngwaọrụ iOS